Ajajaan Waraana Somaaliyaa Ajjeechaa Aggaamame Jalaa Baraaraman
Hagayya 11, 2017
Ajajaan waraana Somaaliyaa General Hussein Hassan Osman mana hidhaa moqadishoo cinatti ajjeechaa itti aggaamame jalaa baraaramuu isaanii madden naga eegumsaa VOA sagantaa Afaan Somaaleef ibsaniiru.
Of wareegaa tokkotu mana hidhaa sana keessatti boombii ofitti dhoose jedhu angawoonni. Kan ajjeechaa irratti aggaamame irraa oolan General Osman battala gamasii baafamaniiru.
VOA sagantaan afaan Somaalee Osmaaniin quunnamuus waa’ee haleellaa Sanaa yaada kennuu hin fedhu jedhan. kanneen ijaan argan akka jedhanitti komaanderichi ennaa isaan konkolaataa isaanii keessaa bu’anii masgiida keellaa mana hidhaa Sanaa keessa turan namni tokko faana dha’ee jedhee jira.
Waardiyaan naga eegumsaa shakkamaa sana dhaabsisee boombiin hidhatee jiru akka dhukaasu dirqiseese. Wayita sanas loltuun tokko yoo du’u kanneen sadii ta’an madaa’uu madden naga eegumsaa ibsanii jiran.
Madden kun akka jedhanitti namoonni sadii to’annaa jala oolaniiru. Namni haleellaa raawwate sun attamiin mana hidhaa guddicha Moqadishoo waaltaa keessa masgiia jiru seenuuf karaa akka argate hin beekamin jiru. Masjiida sana yeroo hedduu angawoota mana murtii waraanaa kanneen shakkamtoota al-shabab himatantu keessatti sagada.
Haleellaa sanaaf Al-Shabaatu itti gaafatama fudhate.